Flash Player waxaa loo heli karaa oo kaliya Linux iyada oo loo marayo Chrome | Laga soo bilaabo Linux
Flash Player waxaa loo heli karaa Linux iyada oo loo marayo Chrome
Tani mar hore waa cawskii ugu dambeeyay. Warkan wuxuu ka yimaadaa gacanta webup8d aadna waan u xanaaqsanahay. Hadda waxaa soo baxday in kuwa Adobe go'aansaday inuu sii wado taageerida 11.2 version de flash Player waayo, GNU / Linux muddo 5 sano ah, laakiin mar dambe sii deyn maayaan xirmo keli ahaan ah.
Laga bilaabo hadda haddii aad rabto inaad ku aragto fiidiyowyo qaabkaas leh noocyada cusub ee badeecada, waa inaad isticmaashaa Google Chrome oo ay ku jiraan su API un "Basbaas" farsamadaan. Google ku siin doonaa «Basbaas» of flash Player loogu talagalay socodsiinta dhammaan barnaamijyada ay taageerayaan Chromeoo ay ka mid yihiin Linux loogu talagalay 32 iyo 64 jajab. Mozilla dhiniciisa wuu ka soo horjeedaa waxaas oo dhan mana doonayo inuu isticmaalo habkan Machiavellian hadda.
Waxaan la yaabanahay waxaani maxay ku saabsan yihiin? Yeelan doonaan Google wax ku saabsan go'aankan Adobe maxaa loogu Chrome noqo biraawsarka ugu isticmaalka badan gudaha GNU / Linux? Si gaar ah igama yaabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Flash Player waxaa loo heli karaa Linux iyada oo loo marayo Chrome
Waxaan u maleynayaa in Google ay bilaabeyso inay noqoto mid cabsi leh ... waxay noqon doontaa malahayga.
Ku soo jawaab Rafa-CBF
Waxaan filayaa. Ma fahmin go'aankan. Adobe miyeysan rabin in tiknoolajiyadooda la isticmaalo? Uma maleynayo sidaas, Google horeyba waxay u leedahay Youtube, miyaad sidoo kale dooneysaa tikniyoolajiyad Flash ah oo si gaar ah loogu talagalay biraawsarkaaga Linux Waxaan rajeyneynaa, HTML5 inay noqoto halbeeg isla markaana Flash uun la beddelay.
Waxaan rajeynayaa in html5 uusan waqti dheer ku qaadan inuu si buuxda u beddelo nalka ...
Chrome wuu fiican yahay, laakiin wuxuu doonayaa inuu ka dhigo qof walba inuu sidan u isticmaalo, mmm ... aad u Machiavellian 😐
Sikastaba, chrome flash waa maktabad .sidaas darteed waxaan u maleynayaa inaan xasuusto inaad ku nuqulan karto galka aad ku leedahay Flash nidaamka isla markaana aad kuwada shaqeyn karto isla noocii Firefox tusaale ahaan. markaa ma fahmin muuqaalkani.
Dhibaatadu maahan inay ka koobiyeeysato maktabada hal meel ilaa meel kale, laakiin waxay tahay in API-ka (sida loo helo howlaha maktabadda) ay is bedesho, Firefox-na ma awoodo inay adeegsato ilaa ay koodhkeeda la jaanqaado dhismaha cusub.
Maanta html5 maahan xal wax ku ool ah gabi ahaanba, xaqiiqdii waxay isticmaashaa cpu ka badan flash-ka mana arki karo fiidiyow 720p ah oo wata html5 marka lala socdo flash iyo ciyaaryahan kasta oo kale, marka waxaan rajeynayaa in tani aysan dhicin dhamaadka…, Sababtoo ah waxaan ahay ma isticmaali doono chrome.
Markay waxyaabahani dhacaan, horumarinta waxyaabo kale ayaa cirka isku shareeraya, wax badan oo ka badan heerka GNU / Linux, oo leh bulsho dhan oo horumariyayaal ah iyo celceliska isticmaalaha GNU / Linux ayaa ka warqaba arrimahan.
Waligayna ma fahmin chrome, runtuna ma jecli
Waligayna ma fahmin chrome, iyo
Runtii ma jecli
Miyuu ku saxsanaa ama ku qaldanaa soo gelinta Google? Taasi waa sidaad u qortay sababta oo ah timo cad oo aad dhahdo waan jeclahay waxay igu tuureen dhunkasho hawo waxaana la iga tuuray booska, taasi waa sababta aan ugu qasbay inaan weeraro, sax?
Markaan idhaahdo waxbaa xun, waqtigu wuxuu u egyahay inuu ila waafaqo, halkanna waxaan ku haynaa cadeynta.
Isugeyn, waxaan isticmaalaa midka bilaashka ah, ee kujira keydadka Arch
Si bilaash ah, midkee ayaad u jeeddaa? Chromium?
Waa maxay dhibaatadu? Sida laga soo xigtay http://en.wikipedia.org/wiki/NPAPI (iyo aqoontayda farsamo iima siiso inaan si qoto dheer u baadho) PPAPI waa wax ka bedel lagu sameeyo NPAPI jira si loo horumariyo meelo dhowr ah. Maaha wax KELIYA u ah Chrome, laakiin qof kastaa wuu hirgelin karaa. Hadda, milkiileyaasha Flash waxay ku qanciyeen inay kani fiican tahay oo ay beddelayaan, laakiin waxay u muuqataa in Mozilla aysan weli ahayn (https://wiki.mozilla.org/NPAPI:Pepper). Anaga isticmaaleyaasha caadiga ah ayaa nalagu xayiray, laakiin halkan uma maleynayo in ragga xun ay yihiin Google, Mozilla ama Adobe. Si fudud waa isbeddelka tikniyoolajiyadda, xumaan iyo samaanba, oo sida isbadalada oo dhan jira ayaa jira. Waxaan u maleynayaa in Mozilla ay la qabsan doonto aakhirka, umana maleynayo inay aad ugu kici doonto kheyraadka ay heystaan. Hadda kaliya waa inay muujiyaan sida ay uga go'antahay bulshada Linux.
In kasta oo biraawsarka Google aad u wanaagsan yahay, xayiraadaha noocan ah ee la saarayo isticmaaleyaasha kale ma ahan kuwo caqli gal ah, caqlina ma ahan. Waa inay jirtaa lacag badan oo ku lug leh, laakiin wax badan, oo loogu talagalay Adobe inuu ku xakameeyo wax soo saarkiisa sidan.
Waa run waxay leedahay dhibco wanaagsan, inkasta oo aanan beddelin Firefox, laakiin tan oo aad sameyso waxay dooneysaa inaad qaaddo dariiqa adag oo kugu qasbo inaad u isticmaasho alaabtaada si aad u badan sida waxa ku dhacaya Win8. Xitaa ma doonayo inaan qiyaaso baastada tirada badan ee ku lug leh ...
Hagaag, horeyba waxaan u isticmaali jiray chrome kudhowaad kaliya laakiin xalka waxaa looyaqaanaa html5
* Mawduuc ka baxsan: Safari iyo Android dafuq ?? !! *
Halkan Chile waxaa ku yaal fikrad tan la mid ah: "Weji kala go '" Waxay ku dhaafi lahaayeen Google haddii ay u adeegsadaan sharaf noocan oo kale ah si ay u helaan dad badan oo ka xada xogtooda daalacashada. Haddii aysan ahayn Gmail iyo Gdocs oo ay tahay inaan u isticmaalo shaqada, waxaan u diri lahaa Google muddo dheer.
Waxaan u maleynayaa inay tahay Adobe lafteeda oo dooneysa inay soo rogto "habka basbaaska". Waxay kuu sahlanaan laheyd inaad ku taageerto nidaamkaas. Mozilla waxay ku dambayn doontaa inay aqbasho PPAPI-ta cusub ama waxay raadin doontaa shaqo-ka-qabasho.
Qof ma ii sharixi karaa sababta ay PPAPI u tahay Machiavellian?
Waxaan u maleynayaa in ninka xun ee halkan jooga uusan aheyn Google laakiin uu yahay Adobe ..., oo leh siyaasadeeda xishoodka ... Marka hore, waxay diidayaan in wax laga soo dajiyo Cuban IP-yada, hadda waxaa la socda arinta haddii ay taageeri doonto nooca Adobe. FlashPlayer ee GNU / Linux OS ... si kastaba ha noqotee, sidaan ku iri maqaal kale, wax walba waa adeegsi iyo suuqgeyn .... midka ugu badan ee bixiyaa waa kan guuleysta ..., rajada kaliya ee xumahaas oo dhan waa HTML5, aan rajeyno inay qabato kor u kaca ay u baahan tahay inay ku laado Flash-ka ....
fiiri ragga ... aan ku xirno dhibcaha:
1aad. Sharciga SOPA
Midda 2aad: Xidh megaupload
3aad: Isbedelka siyaasadaha Google
Afaraad: Toosh loogu talagalay Linux kaliya chrome rome.
QORSHAHA KONTOROOLKA SYSTEMATIC (iyo wax is daba marin !!
Ma jiro indhoole ka xun midka aan doonaynin inuu wax arko ”
Waxaan ku mahadnaqayaa Ilaah ama fursad mar kasta oo aan akhriyo qoraalo badan oo si dhib leh uma isticmaalo YouTube, runtii, haddii "farsamada casriga" aysan jiri lahayn, shabakadu way fiicnaan laheyd waana ku mahadin lahaa. Kaliya waxay umuuqataa inay u adeegto, oo ay weheliso java, si loo aruuriyo macluumaadka gaarka ah loona khiyaaneeyo bey'adaha loogu talagalay ujeedooyin xayeysiin ah (wax aanan u maleyneynin in la yiraahdo naqshad). Labada flash iyo java labaduba waxtar uma leh bulshada, annaga ahaan. Labadaba ma ahan kuwo gaar loo leeyahay
Si aan kuugu sheego in aanan isticmaalin wax Flash ah, maxaa yeelay ma daawan karo fiidiyowyada internetka hehe… 😀
SPARTANS !! UNITED !! waan iska caabin doonnaa html saafi ah !!
Ku kalsoonow in waqti kadib wax walba la gaaro, uma maleynayo inaan awood u yeelan doonno inaan hoos u dhigno xasilloonida weerara xorriyadeenna laakiin waan la dagaallami doonnaa. Waxaan horeyba u aragnay bilowga dhammaadka dayrta Flash, weli waa inaan aragnaa sida qaabab otomatiga xafiisyada lahaanshuhu u dhacaan una dagaallamaan xorriyadda barnaamijka.
Ugu dambeyntiina waxaan dareemayaa in dhammaan daalac-bixiyeyaashu ay qaadan doonaan heerkan, waxaa jira raadiyaha khadka tooska ah ka shaqeeya oo isku dayaya inuu IP-ga ka helo raadiyaha mana aysan suuragalin oo bilaa flash-ka lama maqli karo.
Mar kasta oo aan necbahay Flash badan, waxaanan bilaabayaa inaan jeclaado Google-ka awoodda badan.
Waxaan rajeynayaa in beeshu ay siin doonto dhiirigelin ah in waxyaabaha kale ee Flash ka maqan yihiin, iyadoo la tixgelinayo in HTML5 aysan wali bilaaban.
Marka wax yar ayaan jeclahay chrome-ka xad dhaafka ah
Hagaag hadda waxaan u imid marwooyin waxaanan xalliyaa xalalka si wanaagsan loo beeray:
MINITUBE ... Ma xasuusataa? Youtube bilaa Flash?
Haddii kale… http://www.youtube.com/html5 Taasina waa intaas, diyaar, tirtir dhibaatooyinkaaga, wax yar ayaa ah fiidiyowyada aan khaladka ka helay qaybta rasmiga ah ee Youtube.
Diyaar, waa imisa? Waxa ay mudanayaashu waaweyni rabaan inay sameeyaan waa ii qumman yihiin inaan ka xishoodo, caqli badan ayaan ahay oo waan sameyn karaa la'aanteed oo waan beddeli karaa, wax aan u adeegsado Linux iyo wax aan ahay horumariyaha webka XD
Hagaag, illaa minitube uusan taageerin shabakadaha, xD aniga ima shaqeeyo.
Ka soo dejiso Porn-ka bogagga sida The Pirate Bay, boodhka ka dhig shabakadaha P2P sida amule oo sii xD xD
Seee, laakiin ka aragista khadka tooska ah waxay kaa caawineysaa inaad ogaato waxa ka wanaagsan soo dejinta oo aan soo dejisan, waa sida horudhaca xD
Waxaad ku dambaynaysaa AIDS
Haddii go'aankaasi run yahay, ma qiyaasi karo sababo farsamo oo qiil u siin kara, ama sababo la xiriira waxtar u leh adeegsadayaasheeda Linux ee flash.
Qiimaha Adobe midkoodna wuu ka weyn yahay faa iidooyinkiisa ku aaddan ballaarinta suuqgeeda Linux (oo u muuqda wax aan macquul ahayn) ama macaashkeedu waa ka sii badan yahay isticmaalayaasha yar (sidoo kale waa wax aan macquul ahayn).
Laakiin, haddii gaar ahaanta loo yaqaan 'chrome' ay bixiso faa'iidooyin badan inkasta oo la yareeyo tirada isticmaaleyaasha, markaa hadda ma aha wax aan macquul ahayn.
Laakiin tan gaarka ah ee loo yaqaan 'chrome' si loogu oggolaado faa'iidooyin badan, waxay la macno tahay in qof uu diyaar u yahay inuu bixiyo ama uu gorgortamo ka-reebitaankaas.
Hadday sidaas tahay, qof jecel Chrome isagoon ahayn Google, ama Google laftiisa ayaa ah kan bixin kara ama gorgortan ka samayn kara arrintaas.
Haddii aad tahay jaceylka chrome (ma ahan google co) waxay noqon laheyd uun wax la jecleysto, laakiin haddii ay tahay Google, iyadoo la raacayo fikirkaan, yaa bixin doona ama ka gorgortami doona gooni ahaanshaha, faa iidada aad heli laheyd?
Kordhinta tirada isticmaaleyaashaada Linux waxay yeelan doontaa faa iido aad u yar, marka loo eego saamiga isticmaalayaasha ee nidaamka kaladuwan ee kaladuwan.
Laakiin haddii Google aysan raadineynin waxtar toos ah, laakiin halkii ay ahaan laheyd xaalad tijaabo ah oo ku saabsan heshiis ka weyn, macno ayaa laga yaabaa. Hagaag, qaabkan, isticmaaleyaasha Linux waxay noqon doonaan muunad (ma ahan wakiil, laakiin waa muhiim) waxa dhici kara haddii ay ka dhigto heshiiskaas gaarka ah dhammaan barnaamijyada.
Haddii aad ka fikirayso inaad bixiso heshiis gaar ah oo khatar ah oo aad qaali u ah, ma aha wax lala yaabo in marka hore la sameeyo tijaabo qiime jaban si loo qiimeeyo cawaaqibka ka dhalan kara mashruuca weyn.
Heh, dabcan waxaan iska mala awaalayaa macluumaad la'aan, ama milicsiga igu filan. Marka ha u qaadan hadal ahaan, laakiin kaliya afduub aan loo meel dayin.
War xun u dooda html5
Sabab kale oo wanaagsan oo aan loo adeegsan karin Flash ama Chrome, runta ayaa ah in aysan waxba naga hor istaageynin adeegsiga daalacayaasha kale iyo kuwa kale ee lacag la’aanta ah.
meesha allabariga dijo
Waxaan u maleynayaa in Google ay baabi'isay dhinaca mugdiga ah ee xoogga, hahahaha
Ugu jawaab meeshii allabariga
Waxay ila tahay inaad xoogaa weyn tahay. Ugu horreyntii waxaan haynaa in Adobe uu ka tagay plugin-ka hooyo ee Linux. Runta ayaa ah in warkani uusan ila yaabin, iyadoo la tixgelinayo in waqti aan fogayn ay joojiyeen horumarinta Reader for Linux.
Dhinaca kale waxaan haynaa Google Chrome. Google Chrome wuxuu adeegsadaa nooc khaas ah oo Flash ah oo ku saabsan dhamaan meeraha kumana xirna sheygooda asalka ah sidaa darteed taasi saameyn kuma yeelanayso. Bar.
Uma maleynayo in Google wax shuruud ku xiray. Markii uu Adobe go'aansaday inuusan sii deyn nooc ka mid ah Shockwave Player for Linux, wuxuu horeyba u caddeeyay sida ay u yartahay ee uu u daneynayo nidaamkan suuq ahaan miisaska.
Ubuntu + Android Waa maxay tan ku saabsan?